Ogow sida loo codsado taageerada dhanka ijaarka | Find out how to apply for emergency rent assistance - Somali | Multnomah County
Ogow sida loo codsado taageerada dhanka ijaarka | Find out how to apply for emergency rent assistance - Somali
Sida loo codsado caawimaad
211info: Haddii ama gurigaagu helaan ogeysiinta iska saarida guriga oo la xiriirta bixin la’aanta lacagta ijaarka, si degdega u wac 2-1-1 si aad wax uga ogaato lacag bixinta degdega ah ee taageerada dhanka ijaarka oo ay dhici karto in ay kaa caawiso ka hortagga in lagaa saaro guriga.
Taageerada Dhanka Ijaarka ee Xaalada Degdega ah (Allita): Kani waa nidaamka codsiga dhanka internet-ka oo loogu talagalay barnaamijka taageerada dhanka ijaarka ee gobolka oo dhan. Xaqiiji in aad halkan ka codsato haddii aad u baahan tahay caawimaad ah bixinta lacagta ijaarka ee hadda ama gadaal la iskaga leeyahay ee yimid intii u dhaxaysay Abriil 2020 iyo Juun 2021. Hawsha codsigu ee la isticmaalayo nidaamka gobolku waxay qaadan kartaa waqti la taaban karo, laakiin codsi dhammeystiran ayaa loo isticmaali karaa in loo hawlgeliyo iska ilaalinta iska saarida guriga oo dheeraad ah. Mar kale, haddii aad waqti hesho ogeysiinta iska saarida guriga, xataa ka dib marka la codsado iyada oo la isticmaalayo Allita, si degdega u wac 2-1-1.
Macluumaadka ku saabsan iska ilaalinta iska saarida guriga
Sharciga cusub ee joojinta iska saarida guriga ee Oregon ayaa uu waqtigiisu dhici doonaa Juun 30, 2021, mana aha mid hadda ka dib shaqeynaya.
Laga bilaabo Luulyo 1, Sharciga Senate-ka Oregon ee 278 ayaa bixinaya isla ilaalinta iska saarida guriga ee ay keento bixin la’aanta lacagta ijaarka ee ijaartayaasha dalbada taageerada dhanka ijaarka haddii ay bixiyaan dokumentiyada codsigooda oo siiyaan mulkiilayaashooda guriga. Ijaartayaasha u qalma ee ku nool Degaanka Multnomah waxaa dhici karta in ay xaq u leeyihiin ilaa 90 maalmood oo ah iska ilaalinta iska saarida guryaha ka dib marka mulkiilahooda guriga ay siiyaan ogeysiinta la iskaga baahan yahay. 90-ka maalmood waxay bilaabanayaan marka ijaartuhu dokumentiga siiyo mulkiilahiisa guriga ee loogu talagalay codsigiisa taageerada dhanka ijaarka. Ijaartayaashu waxay heli karaan dokumentiyada ku habboon oo ka socda bixiyaha taageerada dhanka ijaarka ee ay la shaqeynayaan.
Tani waa sababta aan sida ugu adag ugu talinayno in: Ijaartayaashu ay tahay in ay si degdeg ah u codsadaan taageerada dhanka ijaarka haddii ay awoodi waayaan in ay bixiyaan lacagta ijaarkooda.
Haddii aad hayso su’aalo dheeraad ah oo ku saabsan sida iyo goorta la gudbinayo caddeynta codsigaaga, fadlan la xiriir bixiyaha taageeradaada dhanka ijaarka ama Xarunta Sharciga Oregon, Isbahaysiga Bulshada ee Ijaartayaasha ama Adeegyada Gargaarka Sharciga ee Oregon.
Fadlan waxaad ogsoonaataa in ijaartayaashu aanan laga saari karin guriga ee ah in lagu leeyahay ijaarka bilaha u dhexeeya Abriil 2020 iyo Juun 2021, ayna haystaan ilaa Febraayo 28, 2022, si ay dib ugu bixiyaan ijaarkaasi.
Haddii adiga ama gurigaagu helaan ogeysiinta iska saarida guriga oo la xiriirta bixin la’aanta lacagta ijaarka, si degdega u wac 2-1-1.
U qalmida taageerada dhanka ijaarka ee Degaanka Multnomah
Haddii aad tahay qof degan Degaanka Multnomah oo ay dhibaato kaa haysato in aad bixiso bixiso lacagtaada ijaarka (ta hadda jirta iyo ka lala soo daahay) iyada oo sababtu tahay cudurka baahsan, waxaa dhici karta in aad u qalanto helitaanka caawimaad. Waa in aad buuxisaa shuruudaha hoos ku qoran oo dhan si aad ugu qalanto.
Aad tahay ijaarte ku nool Oregon oo dib uga dhacay lacag bixintaada.
Mid ama ka badan oo ah xubnaha ka tirsan qoyskaaga ay soo bandhigi karaan sida cudurka baahsan ee COVID-19 uu si toos ah ama aan toos ahayn saameyn ugu yeeshay awoodooda ay ku bixinayaan ijaarka ama adeegyada ‘utilities’.
Uu dakhliga sanadkii ee gurigaagu gaarsiisan yahay ama ka hooseeyo boqolkiiba 80% heerka Dakhliga Dhexdhexaadka ah ee Degaanka ee loogu talagalay tirada qoyskaaga. Isticmaal shaxanka hoose si aad u ogaato u qalmida dakhligaaga.
80% Dakhliga Dhexdhexaadka ah ee Degaanka (AMI)
Macluumaadka Iska ilaalinta Iska saarida Guriga ee COVID-19 | COVID-19 Eviction Protection Information - Somali
Kiraystayaasaha Degmada Multnomah waxaa laga ilaalin karaa in guryaha looga saro kiro bixin la’aan awgeed ilaa 90 cisho haddii ay codsadaan kaalmo dhanka kirada ah keenaana caddaynta codsi ee ay la..